Are na-arụ ọrụ na nzukọ Philanthropic? | Martech Zone
Na-arụ ọrụ na nzukọ Philanthropic?
Wednesday, November 15, 2006 Na Mọnde, Nọmba 21, 2017 Douglas Karr
Taa, esonyere m na kọmitii ọrụ ebere nke ụlọ ọrụ m, ExactIMPACT. Anaghị m enwe ohere ma ọ bụ ihe onwunwe inyeghachi ya ya mere m kpebiri na m ga-arụ ọrụ ebere n'ebe m na-anọkarị oge! Ekele a na-ele anya na ọ dị njọ maka ndị ọrụ ebere na-elekọta ọtụtụ ndị mmadụ na ndị na-enweghị ike ilekọta onwe ha. Nke ahụ bụ ezigbo okwu mwute nyere ike nke akụ na ụba anyị. Otu ọnụ ọgụgụ iburu n'uche bụ na mgbe ndị mmadụ tụrụ enweghị ọrụ, ha na-agụta n'ezie ndị folks na-eji ego enweghị ọrụ. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-enweghị ọrụ ma na-achọ ọrụ na-enweghị ike ịnweta ha.
Na akụnụba akụ na ụba ọ bụla, ọ bụ ụlọ ọrụ na-eme nke ọma. Y’oburu n’inweghi ohere ile ya, m gha akwado Corporationlọ ọrụ. Ihe nkiri a na-adọta ụfọdụ 'ekpe' aka ekpe, mana enwere m mmasị n'ozuzu ihe nkiri ahụ… nke ahụ bụ 'ụlọ ọrụ' enweghị ọrụ ọzọ ọ bụla belụsọ inweta uru. Nke ahụ bụ naanị ọrụ ngwaahịa nwere maka onye na-ere ngwaahịa.
N'ihi ya, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahapụ itinye aka na ọrụ ebere na ọrụ ebere ndị ọzọ. Nke ahụ jọgburu onwe ya. Mana ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme, ị naghị anụ banyere ha oge niile. Scott Dorsey, onye isi oche nke Kpọmkwem Ngwaọrụ, kwuru okwu taa banyere Salesforce na etu ike ha si enyere ndị mmadụ aka. Amaghị m! Achọtara m otu isiokwu na nso nso a banyere ya:
Benioff hụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nakweere ihe atụ nke inye 1% nke nhatanha, 1% nke uru na 1% nke oge ndị ọrụ site na mmalite. Salesforce.comâ's IPO n'oge ọkọchị nke 2004 tụgharịrị na 1% nke hara nhatanha n'ime nde $ 12, na-atụgharị ntọala ka ọ bụrụ nnukwu nzukọ n'otu ntabi anya. Mana onyinye nke oge ndị ọrụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ndokwa na echiche Benioff n'ihi na ọ na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ dum sonye na mmemme ọdịmma ahụ, na-emetụta ọdịnala ụlọ ọrụ ahụ nke ukwuu.
Scott na-ama kọmiti anyị aka ịhazi mbọ anyị na-agba iji kwado ya dịka Salesforce. Nke ahụ bụ ezigbo ihe ịma aka dị egwu! Ọrụ dị ka nke ahụ na-enye afọ ojuju. Obi dị m ụtọ ịbụ akụkụ nke kọmitii na akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ụlọ ọrụ kwesịrị imekwu ihe, ikekwe ị kwesịrị ịmalite ịjụ ndị na-ere gị otu ha si enyeghachi mmadụ. Ọ bụrụ na nrụgide dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ịmekwu ihe, ha agaghị enweta ihe ịga nke ọma ha chọrọ na-enweghị mmesapụ aka. Otu n'ime ndị otu anyị na-achọ inyere bụ Wheeler Mission:
Watser Mission stats, Indianapolis:
Enwere ihe ruru mmadụ 15,000 na-enweghị ebe obibi n'obodo anyị kwa afọ
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nyere ụlọ: 5,960
Ọnụ ọgụgụ nke nri dị: 19,133
Ọnụ ọgụgụ nke akpa nri kesara: 434
Ndị ikom 68 nọ na mmemme “Mkpa Pụrụ Iche”: nke ahụ bụ karịa karịa na mbụ na mmemme ahụ
N'edetu ihe yiri nke ahụ, Ozi Wheeler ebe a n'obodo chọrọ enyemaka gị n'afọ a. Ọ bụrụ na ị nwere ike, hapụ nri ụfọdụ: Turkey, Makaroni nke Arụrụ n'ụlọ na Chiiz, Nri, Green Beans, Green Salad, Fresh Cranberry Sauce, Dinner Rolls, Apple Cider, Achịcha na achịcha. I nwekwara ike inye onyinye na ntanetị! Wheeler na-achọkwa ndị ọrụ afọ ofufo 100 iji nyere aka na Drumstick Dash, nnukwu ego ha nwetara n'afọ.
Tags: iolọKpọmkwemkpachaara anyandị ahịaakpụkpọ ụkwụụlọ ọrụozi wheeler
Top 10 Ndụmọdụ maka Inweta ego ka mma
Ngwaahịa niile bụ Mkparịta ụka